Mandeha amin'ny tranombakoka Guinea Equatoriale ny sambo fitaterana an-dranomasina manan-tantara
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Guinea ekoatera » Mandeha amin'ny tranombakoka Guinea Equatoriale ny sambo fitaterana an-dranomasina manan-tantara
Ireo toerana manintona dia mitombo tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny toerana iray fizahan-tany haingana indrindra any Afrika. Aorian'ny dokalanonana ecommissioning and send-off ho an'ny Fanahin'i Malabo ny 12 Oktobra 2017 avy any amin'ny Gateway Marina any Brooklyn, New York, ity sambo manan-tantara ity dia mankany Guinea Equatoriale.
Ity sambo ity dia nampiasaina ho an'ny laharam-pahavitrana irery nahatratra dimy arivo kilaometatra avy any Las Palmas, Nosy Canary ary nidina an-tanety niaraka tamin'ny Spirit of Malabo tao amin'ny Bridge New York any Brooklyn ny 28 Novambra 2015. Haharitra iray volana roapolo ny dia.
Ny laharana transatlantic dia natao ho fampandrenesana ny SIDA ary ho fahatsiarovana ny isan'ny Afrikana maty tsy tambo isaina nandritra ny varotra andevo transatlantika ary niasa tamin'ny toeram-pambolena tany Amerika sy Karaiba. Ny sambo dia notohanan'ny Repoblikan'i Guinea Equatoriale niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka maro na eo an-toerana, na eo amin'ny sehatra nasionaly, na manerantany.
Ny sambo naorina Breziliana izao dia hoentina hiverina any Afrika, izay hanehoana fampirantiana maharitra ao amin'ny Museum of Modern Art Ginea Ekoatorialy any an-tanànan'i Malabo. Fitaovana famonoana sy fiarovana, boky, fitaovana, diary, tabilao, fitaovam-pitaterana, sary sy fitaovana fanjonoana izay anisan'ny fiampitana Atlantika hiaraka amin'ny fampirantiana tranombakoka.
Ny lanonana fanesorana sy fandefasana ho an'ny fanahin'i Malabo dia natao hifanindry amin'ny fankalazana ny faha-49 taonan'ny fahaleovantenan'i Guinea ekoatorialy avy any Espana. Ny Spirit of Malabo dia hoentin'ny Maersk Line, orinasa mpandefa kaontenera lehibe indrindra manerantany.
Mampandre ireo mpandeha amerikana ny fiaran'ny Turkish Airlines amin'ny fijanonana VISA